Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Allegiant dia nanambara sidina Key West tsy an-kijanona
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Allegiant dia manantena i Key West fa hisarika be dia be ho an'ireo mpandeha amin'ny fialan-tsasatra mitady toerana fialan-tsasatra mora vidy ho an'ny fitsangatsanganana ririnina.
Allegiant handefa sidina avy amin'ny seranam-piaramanidina Regional Asheville mankany Key West amin'ny 18 Novambra.
Vonona ny hanomboka serivisy manomboka amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena St. Pete-Clearwater mankany Key West amin'ny 19 Novambra.
Allegiant dia hampiasa fiaramanidina Airbus A319 amin'ny zotra Key West vaovao.
Allegiant dia hanampy serivisy tsy an-kijanona avy any amin'ny seranam-piaramanidin'ny faritra avaratr'i Asheville any Avaratra (AVL) mankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Key West (EYW) manomboka ny 18 Novambra, ary serivisy tsy an-kiato avy any amin'ny seranam-piaramanidina St. Pete – Clearwater International (PIE) any Florida mankany amin'ny tanàna nosy manomboka ny 19 Novambra.
Allegiant mikasa ny hanompo an'i Key West indroa isan-kerinandro sy amin'ny andro tsy miova isaky ny làlana vaovao, mampiasa Airbus Fiaramanidina A319.
"Key West no iray amin'ireo toerana tadiavina indrindra any Etazonia ankehitriny," hoy i Drew Wells, filoha lefitra zokiolona Allegiant momba ny fidiram-bola sy ny fandrindrana ny tambajotra. “Manantena izahay fa ho fisarihana lehibe kokoa ho an'ireo mpandeha fialan-tsasatra mitady toerana fialan-tsasatra sahaza ho an'ny fitsangatsanganana amin'ny ririnina ity.”
Tamin'ny volana Jona, Allegiant nanampy serivisy tsy an-kijanona indroa isan-kerinandro ho an'ny Key West amin'ny fiaramanidina Airbus A319 avy ao amin'ny Nashville International Airport (BNA), Pittsburgh International Airport (PIT) ary Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Cincinnati / Northern Kentucky (CVG).
“Faly izahay mandray ireo mpitsidika an'i North Carolina avy any amin'ny faritr'i Asheville sy ireo mpifanila vodirindrina aminy avy any Tampa – St. Pete satria ity serivisy vaovao ity dia hanampy amin'ny fanesorana ireo fiara tsy handeha amin'ny làlambe any ivelany, "hoy i Richard Strickland, talen'ny seranam-piaramanidina ho an'ny Monroe County Florida Keys.